Digital Forensics Myanmar
Digital Forensics Science နှငျ့ OSINT အကွောငျးအား Knowledge Sharing ပွုလုပျခွငျးဖွဈပါသညျ။
Digital Forensics Certificate များ (မြန်​မာပြည်​အတွင်း 2025-​နောက်​ပိုင်းအတွက်​သာ)
Digital Forensics Certificate ​​တွေထဲမှာ အ​ကောင်းဆုံးက​တော့ CHFI နဲ့ SANS(GCFE/ GCFE) က Certificates ​တွေပဲဖြစ်​ပါတယ်​. Back Ground knowldge ကို အ​သေအချာ​ပေးတယ်​.. CHFI ​ဖြေပြီးရင်​ SANS က Course ​တွေကိုပါထပ်​​လေ့လာသင့်​ပါတယ်​. SANS (GCFE.GCFA) ​ဖြေပြီးရင်​လဲ CHFI ကိုထပ်​​လေ့လာသင့််ပါ တယ်​... နာမည်​ကြီး Vendor Certificate ​တွေဖြစ်​တဲ့ Encase ,FTK ,Access Data ​တွေက​တော့ Background Knowldege ကို အပြည့်​အဝ​ပေးမှာမဟုတ်​ပါဘူး. ထုတ်​ထားတဲ့ Haedware Software ကို ဘယ်​က​နေစပြီးအသုံးပြု ရတယ်​ဆိုတာက​နေပဲစပြီးသင်​ပါတယ်​ Background Knowldege ကိုသင်​မှာမဟုတ်​ပါဘူး. GUI မှာ ပါတဲ့ Lable ​လေးကဘာကိုညွှန်းတယ်​ ဘာဆိုတာ​လေးပဲညွှန်းမှာပါ. ဘာ​ကြောင့်​ဘာဆိုတာကို အ​သေးစိတ်​က​နေအစ ​ပါမှာမဟုတ်​ပါဘူး.( SANS က Course က​တော့ CHFI ထက်​ပို​ကောင်းပါတယ်​. ) Encase,FTK,Access Data ​တွေက​ ​ဈေး ကြီးပါတယ်​ .. ဘာလို့လဲဆို law Enforcemet အဖွဲ့အစည်း ​တွေကပဲ အဓိကထားဝယ်​ပြီး Private အ​နေအထားနဲ့သာ ကိုင်​တွယ်​တာများပါတယ်​. ​ OVERALLL ​ပြောမယ်​ဆိုရင်​ Product Certificate ထက်​ ပထမရဲ့ပထမဆုံး
Hashing is Important in Digital Forensics FTK imager will not output hash value and verify hash value for DVD & CD So, .... First - Verify Hash for Original DVD and Take Screen Shoot ,I Check Again and Again for surely hash Values .. Second - make DVD disk image and FTK will output isoBuster CUE Format , Next I Verify Image file for Hash Value , Now Original DVD hash Value and Image Hash Value.So, We got2hash Value. One for Original DVD hash value ,Next Hash Value for forensics image. Now We can investigate and We can Verify Evidence Integrity and We Can show in Court. We got Different hash Value when we Edit DVD in FTK Some Imager have Error , We can Edit Evidence DVD, But hash value are Same
Digital Forensics မှာဘာလို့ Write Protect လုပ်ရတာလဲ ? သ်ိမ်းဆည်းရမိတဲ့ Stroage Device တွေထဲကို သက်သေခံချက်လွဲမှားအောင် မသမာတဲ့ နည်းလမ်းအသုံးပြုပြီး မပြုလုပ်နိုင်အောင် Write Protect ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Write Protect ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် မိမိတင်သွင်းတဲ့ သက်သေခံ Device ဟာ မှန်ကန်တဲ့ သက်သေခံပစ္စည်းဖြစ် ကြောင်း တရားရုံးမှာတင်ပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ချက်က Chain Of Custody (သက်သေခံပစ္စည်းကို Forensics lab) သို့ပို့ဆောင်ခြင်း အပိုင်းကြောင့်လဲပါဝင်ပါတယ်။ Forensics Lab နေရာနဲ့သက်သေခံပစ္စည်းရှိတဲ့နေရာဟာ ဝေးကွာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Forensics Lab ကိုပို့ဆောင်တဲ့ လမ်းခရီးမှာ မသမာတဲ့ နည်းနဲ့ သက်သေခံပစ္စည်းထဲက အချက်အလက်ကို ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း မရှိနိုင်အောင် Write Protect ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Disk Cloning (Bit By Bit Copy)(Forensics Image) ဘာလို့လုပ်ရတာလဲ (Bit By Bit Copy )(Forensics Image) ယူတယ်ဆိုတာကတော့ မူရင်း Device ကို တိုက်ရိုက် စစ်ဆေးခြင်းမပြုပဲ မူရင်း Device အတိုင်းပုံစံတူကူးယူပြီးစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းသက်သေခံ Device ကို မပျက်စီးစေပဲတရားရုံး
Digital Forensics , Computer Forensics , Cyber Forensics အကွောငျးနဲ့ပတျသတျတဲ့ PDF ပထမပိုငျးပါ Digital Forensics Basic (V-1.1) Myanmar
Click To See Digital Forensics (V-1.1)
IoT Device Forensics Flow
IoT Device Forensics Flow IoT Device တွေဟာ 2020 မှာ 34 ဘီလီယံခန့်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ Digital Forensics ထဲမှာ IoT forensics အပိုင်းပါဝင်ပေမဲ့ နည်းပညာပိုင်းအရ အသုံးပြုတဲ့ Hardware ပိုင်းအရ ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ Iot မှာ cable,wireless,RF,Bluetooth,Sensor နဲ့ application မျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။ digital Forensics မှာအသုံးပြုတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနည်းနဲ့ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေကကွဲပြားမှုရှိပါတယ်။အသုံးပြုတဲ့အနေအထား Senor တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး Iot device မျိုးစုံရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Iot device ကို သီးသန့်စစ်ဆေးတဲ့ Forensics device တွေ tools တွေအရမ်းနည်းပါးပါတယ်။ Case တစ်ခုဖြစ်ရင် Iot device အလိုက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်သီးသန့်လိုအပ်သလို သူ့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကလဲ အရေးကြီးပါတယ်။ IoT Forensics Flow မှာ လုပ်ဆောင်ရမဲ့ အပိုင်းတွေ ဆက်စပ်စဉ်းစားရမဲ့ အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။ Case အပေါ်မူတည်ပြီးဖော်ထုတ်ခြင်းအပိုင်းနှင့် ဆက်စပ်စဉ်းစားခြင်း အခင်းဖြစ်တဲ့ နေရာမှာရှိတဲ့ IoT device ကဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲ ဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုတဲအပိုင်း Iot device နဲ့ ဘာတွေကို ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတဲ့အပိုင်း Iot Device တွေကို ဘာနဲ့အဓိကထိန်းချုပ်သလဲဆို
Digital ForensicsBasic (Myanmar Version -1) Digital Forensics , Computer Forensics , Cyber Forensics မွနျမာ PDF အပိုငျး (၁)
Click To View Digital Forensic Myanmar (V-1) Digital Forensics , Computer Forensics , Cyber Forensics မွနျမာ PDF အပိုငျး (၂) Digital ForensicsBasic (Myanmar Version -1) Comming Soon !
Timestamp Forensics (FAT32 & EXT4) Part 3
File System တစ်ခုမှာ Categories5ခု ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Digital Forensics လုပ်တဲ့နေရာမှာရော သက်သေခံတင်ပြတဲ့နေရာမှာရော ယခုဖော်ပြထားတဲ့ Categories 5ခုစလုံးက အကျုံးဝင်ပါတယ်။ File System (Eg.NTFS,FAT32,) File Content (Eg.docx .txt,.html) Metadata (Eg. file location, Time Stamp ) File Name (Name of file) Application (Eg. File Open Application , MS Word, WordPad and Notepad) NTFS မှာ docx file တစ်ခုကို ပြုလုပ်ပြီး Copy,Cut လုပ်ကာ မတူတဲ့ Location တွေမှာ ထားကြည့်တာပါ။ Create Date (ctime) ကပြောင်းလဲမှုမရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် FAT32 (USB) ထဲကိုပြောင်းလဲကြည့်တဲ့အခါမှာလဲ (ctime) ကပြောင်းလဲမှုမရှိ တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။FAT32 မှာ Last Accessed Date time ကိုမှတ်သား ထားခြင်း မရှိပါ။ Create Date & Times, Modify Date & Times ကိုသာမှတ်သားထားပါတယ်။ FAT32 (USB)ထဲမှာ docx file တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပြီး NTFS ထဲကို ပြောင်းထည့်တဲ့အခါမှာလဲ(ctime) ပြောင်းလဲမှုမရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ NTFS ထဲမှာပဲ ခုနက paste လုပ်ထားတဲ့ File ကို File Name ပြောင်းပြီး အထဲက စာတွေ Edit လုပ်
NTFS File System timestamp Forensics Part 2
NTFS Time Stamp Forensics အဆက်ပါ w10 မှာ thirdeye အမည်နဲ့ word,pdf,image file3ခု create လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ timezone က GMT6:30 အချိန်နဲ့ပါ။ file တစ်ခုချင်းစီရဲ့ metadata timestamp ကို ပုံမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ window 10 u thirdeye အမည်နဲ့ word,pdf,image file3ခုကို Window7(GMT7) ထဲကို ပြောင်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ file တစ်ခုချင်းစီရဲ့ metadata , timestamp မှာ အောက်ပါအတိုင်းပြောင်းလဲသွားတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် TimeZone လွဲနေတဲ့ GMT7နဲ့ window7ကို Time Zone ပြောင်းပြီးလေ့လာကြည့်ပါမယ်။ အခုအနေအထားမှာ window7က vmdk file type ဖြစ်ပါတယ်။ vmdk file type ဖြစ်လို့ vmware ကို dick image (bit by bit) Copy ယူပါမယ်။ Logical Drive တစ်ခုလုံးအစား အခုအချိန်မှာ vmdk တစ်ခုကိုပဲ image ယူထားပါတယ်။ မစစ်ဆေးခင်မှာ forensics လုပ်တဲ့ workstation timezone သို့မဟုတ် forensics tools ရဲ့ timezone ကိုချိန်းထားရပါမယ်။ Example Encase , autopsy, FTK Thirdeye ဆိုတဲ့ World file က forensics workstation မှာပြောင်းလဲသွားပုံပါ Thirdeye.World file ရဲ့ Metadata တွေပါ
NTFS File System timestamp Forensics Part 1 NTFS file system ထဲမှာ Master File Table (MFT)ပါဝင်ပါတယ်။ HardDisk အကြောင်းရေးသားတုန်းက MFT ထဲမှာ Hard Disk ရဲ့ ဘယ် Cluster ဘယ်လောက်မှာတော့ file ,folder နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ကို သိမ်းထားပါတယ်ဆိုပြီး ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။MFT မှာ နောက်ထပ်သိမ်းထားတာကတော့ MFT ရဲ့ $STANDARD_INFO ထဲမှာ Modified Time (M-time) Accessed Time (A-time) Created Time (C-time) Changed ($MFT မှာ Modifiedလုပ်တဲ့အချိန် ) (သာမန်အနေအထားဖြင့် User မမြင်နိုင်) ဆိုပြီး4ခုရှိပါတယ်။ အပေါ်3ခုဖြစ်တဲ့ Modified Time (M-time) Accessed Time (A-time) Created Time (C-time) ကတော့ user ကကြည့်လို့ရပါတယ်။ Changed ($MFT Modified) ကိုတော့ Forensics tools တွေ MFT viewer tools တွေနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ example autopsy,Encase,FTK, $FILE_NAME မှာတော့ file, folder တွေရဲအမည်ကို မှတ်သားထားပါတယ်။ ဒါဆိုရင် file တစ်ခု folder တစ်ခုကိုကြည့်တာနဲ ဘယ်အချိန်မှာ Create လုပ်တယ်ဘယ်အချိန်မှာ modified (edit) လုပ်တယ် ဘယ်အချိန်မှာ access လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ MAC time ကိုသိနိုင်ပါတယ်။ Antiforensics အနေနဲ့ tim
Metadata ဆိုတာကတော့ data တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးဖော်ပြတဲ့ အချက်အလက် ( data) တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Metadata က သက်ဆိုင်တဲ့ data တွေနဲ့တွဲပြီးရှိနေတတ်သလို အခြား file type အဖြစ်လဲရှိတတ်ပါတယ်။ တွေ့ရတာများတဲ့ metadata တွေကတော့ file extension,file size,file ကို create လုပ်တဲ့အချိန် , ဘယ်သူက Create လုပ်တယ် , ဘယ်စက်မှာ create လုပ်တယ် , ဘယ်အချိန်မှာ ဖွင့်တယ် ပြင်ဆင်တယ် စသည်ဖြင့်ရှိပါတယ်။ Metadata ကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက် tools တွေမလိုအပ်ပါဘူး အချို့သော အနေအထားအတွက်လဲ သီးခြင်း tools တွေရှိပါတယ်။ Metadata ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် သီခြား Tools တွေလိုအပ်တဲ့အခါရှိသလို မလိုအပ်တာလဲရှိပါတယ်။ Anti Forensics tools တွေလဲရှိပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ word file တစ်ခုကိုကြည့်ရအောင် word file è Right Click è Properties è Detail မှာ test1 ရဲ့ Metadata ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Author name မှာတော့ PC name ပေါ်မှာပါ။ File ကို ဘယ်အချိန်မှာ နောက်ဆုံး save တယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ Create လုပ်တယ် ဘယ်အချိန်မှာ နောက်ဆုံး အသုံပြုပြီး save တယ်။ edit လုပ်တာကြာချိန် နဲ့ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ဖွင့်ပြင်တယ်ဆိုတာက အစမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် test1
Excange PCB Board
Excange PCB Board Computer Forensics မှာ အဓိက ပါဝင်​​နေတဲ့ ​အလုပ်​ဟာ Recovery ပြုလုပ်​ခြင်းအပိုင်းလဲပါဝင်​သလို ​ရောက်​လာတဲ့ Computer ​တွေက အ​ခြေအ​နေအမျိုးမျိုး ​ကြောင့်​ ပျက်​စီး​နေတာလဲရှိပါတယ်​ Fill HR Barcuda Seagate 500 Gb Kc48 Firmware. Model ST500DM002 7200 RPM HD Power On ကတည်းက Spindel Motor ကလည်​ပတ်​ ခြင်းမရှိပါဘူး ကနဦးဆုံး စတင်​စစ်​​ဆေးလိုက်​တဲ့အချိန်​မှာ HD PCB Fill ဖြစ်​​နေတာကို​တွေ့ရပါတယ်​ ... အခုအ​နေအထားအထိ အတွင်းပိုင်းကိုဖြုတ်​စရာမလို​သေးပါဘူး ဒါ​ကြောင့်​ အသင့်​ရှိပြီးသား Model တူ Firmware တူ RPM တူ တဲ့ အခြား HD က PCB ကို ဖြုတ်​လဲပါတယ်​ လဲပြီးတဲ့​နောက်​မှာ HD ကို Sata ကြိုးမတပ်​​သေးပဲ Power ​ပေးပါတယ်​ Spindel Motor လည်​ပတ်​ခြင်း ရှိ မရှိနဲ့ အခြား False ရှိမရှိစစ်​​ဆေးရပါတယ်​ အဆင်​မ​ပြေရင်​ Bit by Bit Copy ကူးတဲ့အခါမှာ တစ်​ဝက်​တစ်​ပျက်​နဲ့ Fill ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​ Third Eyes
Volume Shadow Copy (VSS) Forensics
Volume Shadow Copy (VSS) Forensics Volume Shadow Copy (VSS) နှင့် System Restore Points Volume ခြားနားချက်ကတော့ system restore point မှာ OS ရဲ့ Good Condition အနေအထားကိုပဲရောက်ရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့တွဲလျှက်ရှိတဲ့ Volume Shadow Copy မှာတော့ User ရဲ့ အရင်တစ်ချိန်ကရှိခဲ့တဲ့ File folder Web History , Registry , etc စတာတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ Volume Shadow Copy (VSS) ကတော့ NTFS file System ကိုပဲ Support လုပ်ပါတယ်။ VSS ကို ရှာဖွေနိုင်တဲ့ Tools တွေ Free ရရှိနိုင်ပါတယ်။ vssadmi n နဲ့လဲ cmd(admin) ဖြင့်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိခေတ်စားနေတဲ့ Forensics Tools တွေမှာ Volume Shadow Copy (VSS) အတွက် သီးသန့် ရှာဖွေစစ်ဆေးလို့ရတာတွေရှိပါတယ်။ example Encase Encase မှာဆိုရင် အရင် အစ်ကိုရေးထာတဲ့အတိုင်းပဲ forensics image ကို Write Protect device နဲ့တွဲဖက်ပြီးရယူ ပြီးရင် Image file ကို MD5 SHA တစ်ခုခုသုံပြီး Hash value (True Copy) ဖြစ်အောင် လုပ်ပါမယ်။ ပြီးရင် Forensics WorkStation မှာ ခုနက ယူထားတဲ့ forensics image file ကို Mount လုပ်ပြီး Volume Shadow Copy (VSS) ကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖွေတဲ့အခါ VSS ရ
What Where Who When How
What Where Who When How အခြား ဘာသာရပ်​​တွေမှာလဲ ဒီအ​မေး ဟာရှိပါတယ်​ Digital Forensics မှာ​ဆိုရင်​ စစ်​​ဆေးသူ​ရော .. တရားသူကြီး​ရော စစ်​​ဆေးရမဲ့ ​စဉ်းစားဆုံးဖြတ်​ရမဲ့ေ​မးခွန်း​တွေဖြစ်​ပါတယ်​ What ဘယ်​လိုအမှုမျိုးလဲ Where ဘယ်​​နေရာမှာ ကျူးလွန်​တာလဲ Who ဘယ်​သူက ကျူးလွန်​နာလဲ When ဘယ်​အချိန်​မှာ ကျူးလွန်​တာလဲ How ဘယ်​လိုပုံစံနဲ့ကျူးလွန်​တာလဲ What ​​ Cyber Crime Case ထဲက ဘယ်​လိုအမှုမျိုးလဲ အမှုအ​နေအထားနဲ့ ဖြစ်​ရပ်​ကိုကြည့်​ခြင်းဖြစ်​ပါတယ်​ Where မှုခင်းဖြစ်​တဲ့​နေရာမှာ or အနီးတဝိုက်​မှာ ​ကျူးလွန်​တာလား or အ​ဝေးက​နေ ထိန်းချုပ်​ကျူးလွန်​တာလား Who ဘယ်​သူက ကျူးလွန်​တာလဲ ​တစ်​​ယောက်​ထဲဖြစ်​နိုင်​လား ပူး​ပေါင်းမှုပါသလား (အမှုအ​နေအထားအရ) How ဘယ်​လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ကျူးလွန်​တာလဲ ကျူးလွန်​တဲ့အခါ case ပုံစံအရ တစ်​​ယောက်​ထဲက ကျူးလွန်​နိုင်​တာလား ပူး​ပေါင်းသူပါဝင်​ပါက ဘယ်​လိုကျူးလွန်​နိုင်​မလဲ Cyber Crime ကျူးလွန်​နိုင်​တဲ့ အ​ခြေအ​နေ​တွေက​တော့ Law မှာပါမှာ​ပေါ့ ... Case ​ပေါ်မူတည်​ပြီး Cyber Law အရ ပတိသတ်​​နေလား တစ်​ခြား ပြစ်​မှု​တွေနဲ့​ရော ပတ်​သ​တ်​​နေ လားဆိုတာက​တော့ Law Enforcement
First Responder Team (မြန်မာ အခေါ် နယ်မြေခံရဲ ဖြစ်နိုင်သည်) သက်သေခံ အချက်အလက်အများသည် အခြားနေရာများတွင်ပါရှိနေလျှင်
First Responder Team (မြန်မာ အခေါ် နယ်မြေခံရဲ ဖြစ်နိုင်သည်) သက်သေခံ အချက်အလက်အများသည် အခြားနေရာများတွင်ပါရှိနေလျှင် (Warrant ရနိုင်သော အနေအထား) First Responder Team (မြန်မာ အခေါ် နယ်မြေခံရဲ ဖြစ်နိုင်သည်) သက်သေခံ အချက်အလက်အများသည် အခြားနေရာများတွင်ပါရှိနေလျှင် (Warrant ရနိုင်သော အနေအထား)
Digital Forensics Flow
အခုအခြေအနေကတော့ First Responder Team က သက်သေခံအချက် အလက် တွေနဲ့ Device တွေက နေရာတစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့ အနေအထားမှာ လုပ်ဆောင် ရမည့်အခြေခံအချက်အလက်များဖြစ်ပါတယ်။တည်နေရာတစ်ခုထဲဆိုတာ သက်သေခံအချက်အလက်တွေထဲက တစ်ချို့ဟာ Cloud အပိုင်း Data Center အပိုင်းမှာ ရှိမနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖမ်းဆီးသိမ်းဆည်းရမည့် Case သဘာသဘာဝကိုနားလည်ခြင်း ဆိုတာကတော့ မိမိတို့သွားရောက် သိမ်းဆည်းရမဲ့ အမှုက ဘယ်လိုမှုခင်းမျိုးလဲ ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုသက်သေခံအချက်အလက်တွေက အရေးကြီးတယ် ဘယ်လို Device တွေရှိတတ်တယ်ဆိုတာကို First Responder Team ကနေကြိုတင်သိရှိပြီး First Responder Kits ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်လို့ရပါမယ်။ (First Responder Kits မှာ Digital Crime အတွက် accessories မျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်) အခုအခြေအနေကတော့ သက်သေခံ အချက်အလက်တွေက နေရာတစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့ အနေအထားပါ။ သက်သေခံ Device တွေက Desktop laptop လား သူနဲ့ဆက်စပ်သုံးစွဲတဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေရှိလား ( eg. Printer) Printer သုံးစွဲပါက ထုတ်ထားတဲ စာရွက် ဓာတ်ပုံ အပိုင်းအစတွေရှိလား။ Lan ဒါမှမဟုတ် Internet နဲချိတ်ဆက်ထားခြင်းရှိလားဆက်စပ်သုံးစွဲသော ပစ္စည်များ External Hard Drives, Removabl
Trand Micros နှင့်​ US ​ထောက်​လှမ်း​ရေးတို့ပူး​ပေါင်း၍ cyber Crime အားကျူလွန်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးအား သု​တေသန စာတမ်းပြုလုပ်​ MY SPACE Social Network တွင်​ Server ပြုပြင်​ထိမ်းသိမ်း ခြင်းလုပ်​ငန်း လုပ်​​ဆောင်​အပြီး ၃ နှစ်​စာပမာဏခန့်​ရှိ​သော Photo mp3 video များ ဆုံးရှုံး Crypto Currency exchange များမှ ​ခိုးယူမှုသည်​ 2018 ခုနှစ်​နှစ်​ချုပ်​အရ 2018 တွင်​ဆုံးရှုံးမှုသည်​ 2017 ခုနှစ်​ထက်​3ဆပိုမိုများပြားလာသည်​ ​ဂျပန်​ ကိုရီယားအီတလီတို့တွင်​ စုစု​ပေါင်း US ၁ ဘီယံ​ကျော်​ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်​ က​နေဒါ​ရွေး​ကောက်​ပွဲနီးလာချိန်​တွင်​ ပါတီများမှ မဲဆန္ဒနယ်​ များအတွက်​ မဲ​​ပေးသူများစီစစ်​ရာတွင်​ Big Data analysis ပြုလုပ်​ခြင်းများပြုလုပ်​​နေသည်​. ပါတီများသည်​ ယခုအခါ Cyber ချိန်း​ခြောက်​မှုများ ကြုံ​တွေ့​နေရသည် UK အမျိုးသားလုံခြုံ​ရေးမှ Huawei network and Telecom Devices များသုံးစွဲရာတွင်​လုံခြုံ​ရေး ​ပေါက်​ကြားမှုအား ​သုံးသပ်​ချက်​နှင့်​ အကြံ​ပေးချက်​စာတမ်း​ ပြုလုပ်​ပြီး ဖြန့်​​ဝေ တရုတ် company ပိုင် ​​Grindr (Gay Dating App) သည်​ User များ၏ အချက်​အလက်​များကို ရယူမှု​ကြောင့်​ US အ
I AM AUNG ZAW MYO (THIRDEYE) https://www.linkedin.com/in/aungzawmyo/
November 2021 18
Digital Forensics Certificate များ (မြန်​မာပြည်​အတ...
Hashing is Important in Digital Forensics FTK im...
Digital Forensics မှာဘာလို့ Write Protect လုပ်...
Digital Forensics , Computer Forensics , Cyber For...
Digital ForensicsBasic (Myanmar Version -1) Digit...
NTFS File System timestamp Forensics Part 1 NTF...
First Responder Team (မြန်မာ အခေါ် နယ်မြေခံရဲ ဖြစ်န...
Cell Site Analysis And Call Detail Record
Digital Forensics Lab Guidelines
Digital Forensics Question and Answer
Digital Forensics Quizs
ISO Standards for Digital Forensics
ISO/IEC 27037 Digital Evidence Handeling
OSINT Case Study
SSD Forensics Challenges
USEFUL OSINT LINKS
DFIR & OSINT LINKS
SOCIAL MEDIA OSINT